Xirfadaha - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Ku soo biir Kooxda Shabakada Iskuulka Charter-ka ee ugu Weyn!
Shaqaalaha ka shaqeeya Koleejooyinka Hore ee Colorado waxay filan karaan:
Dhaqan laga filayo: Dhammaan ardayda CEC waxaa laga filayaa inay dhigtaan kuleejka inta ay ku jiraan dugsiga sare.
Saaxiibbada Cajiibka ah: Dugsi kasta oo CEC ah waxa uu leeyahay koox ka kooban karti sare, guul, iyo macalimiin xamaasad leh kuwaas oo ay ka go'an tahay in ay wax baraan arday kasta.
Kooxda Taakuleynta: CEC waxay taageertaa mid kasta oo ka mid ah xubnahooda kooxeed jawi iskaashi heer sare ah, labadaba xirfadahooda iyo noloshooda gaarka ah.
Barashada Xirfada: CEC waa urur waxbarasho oo taageera kana hortaga xubin kasta oo shaqaale ah inay waxbartaan kuna koraan barashada xirfadeed ee joogtada ah, tababarenimo iyo taageerada asxaabta.
Guusha Xirfadeed: CEC waxay siisaa qof walba oo kooxdeena ah fursad ay ugu guuleystaan ​​heerka ugu sarreeya - dhiirrigelinta iyo beddelka nolosha ardayda.
Waxa aan Raadino:
CEC waxay raadisaa musharixiinta leh dabeecad adag, hamiday heer sare, ka go'naan la'aan horumarinta ardayda, rabitaanka khatarta, rabitaan ah in ay noqdaan ardayda kudayashada dugsiga, iyo awoodda ay u shaqeeyaan si adag si ay u taageeraan guusha gaarka ah ee ardayga. Kulliyadaha Hore ee Colorado waxay si sharaf leh u qiimeeyaan kala duwanaanshiyaha oo waa loo shaqeeyaha fursad siman.
Fiiri Fursadaha Xirfadeena Hadda
Dhammaan codsadeyaasha lagula taliyay inay shaqaaleeyaan waxay ku xirnaan doonaan baaritaan asalka ah.
Kulliyadaha Hore ee Colorado ma takooraan iyagoo ku saleynaya jinsiyad, midab, asal qaran, jinsi, macluumaad hidde, da ', diin, ama naafonimo gelitaan, marin u helid, ama go'aaminta shaqada barnaamijyadeeda waxbarasho ama howlaheeda.
Iyadoo la raacayo sharciga federaalka, dhammaan dadka la shaqaaleysiiyay waxaa looga baahan doonaa inay xaqiijiyaan aqoonsiga iyo u qalmida inay ka shaqeeyaan gudaha Mareykanka iyo inay dhameystiraan shaqada loo baahan yahay ee waraaqaha la safan.